Dawladda Islaamka oo dad badan ku laysay Pakistan - Worldnews.com
Qarax ka dhacay masaajid caan ah oo ku yaalla Koonfurta Pakistan ayaa dilay ugu yaraan 72 ruux, sida ay booliisku sheegeen.
Qofka qaraxa gaystay ayaa isku qarxiyay dad Suufiyo ah oo ku cibaadaysanayay magaalada Sehwan ee gobolka Sindh, sida ay booliisku sheegeen.
Rai'salwasare Nawaz Sharif ayaa cambaareeyay
"Waxaan arkay maydad meel walba yaalla, waxaan arkay maydadka haween iyo carruur"
Dowladda Pakistan ayaa sheegtay inay dagaalyahanno mintidiin ah ku dishay howlgal ay fulisay ka dib weerarkii 72-da qof lagu dilay. Ururka Daacish ayaa weerar ku qaaday...
Kabul: Ugu yaraan 29 ku dhimatay xuska sannadka cusub ee Nayruuska
Ugu yaraan 29 ruux ayaa ku dhimatay 18 kalana dhaawac ayaa soo gaaray ka dib markii la qarxiyay macbad u dhaw magaalada Kaabuul, sida ay saraakiishu sheegeen. Warbixinnada...
Dadka magaalada Lahore ee dalka Pakistan ayaa codkooda ka dhiibanaya doorasho ku celis ah oo aad loo sugayay, taas oo ku timid is casilaaddii raysal wasaarihii hore bishii...
Shiico badan oo lagu laayay Afghanistan
Ugu yaraan 40 ruux ayaa ku dhimatay 30 kalana dhaawac ayaa ka soo gaaray weerar is qarxin ah oo lagu bartilmaameedsaday xarun dhaqanka iyo diinta qaabilsan oo ay Shiico...
Konton ruux oo ku dhimatay qarax ka dhacay masaajid ku yaalla Nigeria
Ugu yaraan 50 ruux ayaa ku dhimatay isqarxin ka dhacday magaalada Mubi ee ku taalla waqooyiga-bari ee dalka Nigeria, sida ay booliisku sheegeen. Goobta la qarxiyay ayaa...
Ugu yaraan 50 ruux ayaa ku dhimatay isqarxin ka dhacday magaalada Mubi ee ku taalla waqooyiga-bari ee dalka Nigeria, sida ay booliisku sheegeen. Goobta la qarxiyay ayaa ahayd masaajid waxayna dadku ku jireen...
"Dawladda Islaamka" oo dad ku laysay Suuriya
Inkabadan 30 qof oo isugu jira rayid ah iyo dagaalamayaasha Kurdiyiinta ayaa dhimatay, 34 kalena dhaawayo ayaa ka soo gaaray weerar ay kooxda isku magacawda Dawladda Islaamka ka fulisay agagaarka xadka dalalka Ciraaq iyo Suuriya. Kooxdu waxay bartilmaameedsatay xero qaxooti oo ay ku noolyihin dad ka soo barakacay colaadda dalka Suuriya iyo qaxooti kale oo iyaguna ka soo jeeda...
Ugu yaraan 50,000 oo ka mid ah malayshiyo ka tirsan kooxda isku magacawda Dawladda Islaamka ayaa la dilay tan iyo markii xulafada uu Maraykanku hogaaminayo ay weerarada ka billaabeen Ciraaq iyo Suuriya labo sano ka hor, sida uu sheegay sarkaal Maraykan ah. Tiradaas ayaa muujinaysa in duqaymaha xagga cirka ah iyo tiro yar oo ka mid ah ciidammada Maraykanka oo caawinaya xoogagga...
Hindiya oo xaqiijisay in ay Dawladda Islaamku laysay 39 ruux oo Hindi ah
Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Hindiya Sushma Swaraj ayaa xaqiijisay in ay dhinteen 39 ruux oo dhisme ka shaqaynayay oo kooxda isku magacawda Dawladda Islaamka ay ku afduubatay dalka Ciraaq. Waxay sheegtay in dheecaanka Hide sidaha (DNA) ee 38 shaqaalaha ka mid ah ay waafaqeen maydadka laga helay xabaal wadareed. Dawladda Hindiya ayaa si joogto ah u sheegi jirtay in ay dadkaasi...